माधव नेपालको मन किन पोल्छ ? | माधव नेपालको मन किन पोल्छ ? – हिपमत
नेकपा प्रचण्ड–माधव पक्षका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सवै नेता उस्तै हुन् भन्दा आफ्नो मन घोच्ने र पोल्ने गरेको बताएका छन् । बुधबार सम्पादकहरुसँगको अन्तरक्रियामा अध्यक्ष नेपालले तत्कालिन एमालेको तर्फबाट गणतन्त्रका पक्षमा कुरा ल्याउने पहिलो व्यक्ति आफू नै रहेको बताए ।
उनले केपी ओली अध्यक्ष भएबाटै एमालेको यात्रा ओरालो लाग्न थालेको पनि स्मरण गरे । ‘त्यो बेलादेखि नै हामी पीडित हौँ,’ नेपालको भनाइ छ । उनले सरकार र पार्टीबीचको सम्बन्ध गर्न तयार रहेको भन्दै दस्तावेजमा हस्तक्षेप नभएपनि नीतिगत कुरामा पार्टीमा सल्लाह हुन जरुरी रहेको बताए । उनले पहिला पार्टीमा हरेक विषयको पार्टी कमिटिबाट निर्णय हुने गरेपनि पछिल्लो समय ओलीको एकाधिकारवादी सोच र अपारदर्शीताले त्यो हुनै छाडेको बताए ।
‘सिस्टम पालना गर्न र त्यो बनाउने हामी प्रतिवद्ध, त्यो नहुँदा मानिस अविश्वास हुन्छ । देश डुब्न लागेको अवस्थामा पार लगाउने व्यक्ति पार्टी र समाज सवैतिर चाहिन्छ,’ अध्यक्ष नेपालको भनाइ छ । उनले घरमा वा बालुवाटारमा बैठक डाक्ने कुरामा आफू विरोधी रहेको भन्दै संस्थागत तरिकाले अघि बढ्नुपर्ने मान्यतामा अडिग रहेको बताए ।
अध्यक्ष नेपालले ओलीले प्रतिगमनको स्टेप चाल्ने पहिल्यै चेतावनी दिएको भन्दै आफूलाई ललिता निवास र प्रचण्डलाई थुन्न खोजिएको आरोप लगाए । उनले ओली बदलाको भावनाले चल्ने मान्छे रहेको भन्दै उनले कसैले चुनौती दिएको मन नपर्ने बताए ।
‘उनी आलोचना गर्नेविरुद्ध अरिंगाल, साइवर सेना चलाउँछन् । त्यसका पीडित सवैले हात मिलाउनुपर्छ’, नेपालको आग्रह छ ।